Archive du 09-nov-2021
Hery Rajaonarimampianina “Apetraho ny fitoniana, avoahy ny gadra politika ”
Nivoaka tao anatin’ny fahanginany ny Filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina, izay nampahatsiahy fa namindra fahefana ara-demokratika,
Fitantanana Tip top
Ny eo tsy milamina ny eo misosoka ihany! Rehefa tena zohiana, tsy misy mandeha amin’izay laoniny ny fitantana ity firenena ity, fa tena miainga amin’ny “tip top” mandavan-taona.
Manao avo vava ny Minisitry ny asa vaventy “Manana 549 miliara ny FR ka izay 10% ve tsy ho voaloa…”
Somary nampiaka-peo sy nanangam-bovona ny Minisitry ny asa vaventy Atoa Gerry Hatrefindrazana omaly teo anatrehan’ny raharaha fitakian’ireo mpandraharaha nanao làlana ny volany, izay
Miandrivazo Nanjavona ny gadra 32 kanefa tsy vaky ny fonja
Tsy vaky ny fonja ary tsy nisy ny lositra na fitsoahana saingy tsy hita fotsiny ireo gadra miisa 32 tao Miandrivazo, raha ny fanazavana voaray teo anivon’ny tale jeneralin’ny fandraharahana ny fonja na DGAP,
Nakatona ny sekoly lehibe roa Miparitaka indray ny coronavirus ao Morondava
Voatery nakatona ny sekoly St Paul sy ny sekoly teknika ao Morondava, faritra Menabe noho ny fahitana tranga corona virus avy amin'ny fifampikasohana tao amin'ireo sekoly ireo, araka ny fampitam-baovao ofisialy.
Hanao hetsika anio ny Randrana sendikaly “Tokony soniavina ilay fifanarahana C 176”
Misy ny naoty navoakan’ny tale jeneraly misahana ny asa mikasika ny fanitarana ny fifidianana delegen’ny mpiasa, hoy ny fampahatsiahivana avy eo anivon’ny Randrana sendikaly-USAM-SVS.
Miha mangotraka ny krizy Hampiakatra saran-dàlana ny zotra nasionaly
Tao anatin’ny andro vitsy no efa niparitaka ny fampahafantarana fa hampiakatra ny saran-dàlana ny zotra nasionaly rehetra mampifandray an’Antananarivo Renivohitra sy ny faritra manerana ny Nosy manomboka ny 22 novambra
Vidin’ny atody Ahiana ho tafakatra 800 Ar amin’ny fety
650 Ar no vidin’ny atody iray lehibe sy voafantina amin’izao eny an-tsena ankehitriny raha 350 Ar ireo efa misy vaky sy madinika amidy etsy amin’ny tsenan’ny atody etsy Antohomadinika.
Centre Ihosy Nahazo EPP manara-penitra
Nahazo EPP manara-penitra ny Centre ao Ihosy. Tonga nanara-maso ny fizotry ny asa fanamboarana ny EPP ny foto-drafitrasa tao an-toerana ny governoran'ny Faritra Ihorombe,
Laboratoaran’ny asa vaventy Kasaina havadika ho orinasa tsy miankina
Nanomboka nitokona teo an-tokontaniny tetsy Alarobia omaly vao maraina ireo mpiasa eo anivon’ny laboratoara nasionaly momba ny asa vaventy na LNTPB
Matimaty foana i Valimbavaka Nahoana no tsy atao fanadihadiana ireo miaramila ?
Toy ny matimaty foana tahaka ny valala nosamborim-boka hatreto I Nasandratra Valimbavaka Rambolamendrika na “Mota”, tovolahikely vao 15 taona,
Naivo Raholdina Miantso fampihavanam-pirenena
Noporofoin’ny Solombavambaohaka, Naivo Raholdina, fa 12 taona ny naha volomboasary azy ary 2 taona naha filohan’ny departemantan’ny TGV na antoko politika Tanora Gasy Vonona ao amin’ny Boriborintany fahadimy azy.
Politika avo lenta Mandeha ny ketrika fananganana tetezamita…
Efa tena tafiditra tanteraka ao anatin’ny kajikajy hitazonana ny fahefana amin’ny 2023 ny Fitondrana Rajoelina. Ny vaomieram-pirenena mikasika ny fifidianana (CENI),
Fiomanana amin’ny fifidianana 2023 Tambatambazana indray ireo ben’ny tanàna
Raikitra ny famoriana ireo ben'ny tanàna manerana ny Nosy miaraka amin’ny Governora, tanterahina any Antsirabe nanomboka omaly 08 novambra.
Dahalo voatoraky ny lefona Tratran’ny zandary nitsabo tena tao Antsalova
Nitrangana fanafihana tao amin’ny tanàna antsoina hoe Ankiliabo, fokontany Saririaka, Kaominina ambanivohitra Antsalova, ny alakamisy lasa teo, raha ny fampitam-baovao voaray.
Herinandro ho an’ny fandraharahana “GEW” “Omena fanampiana ireo tanora manana tetikasa”
Nisokatra ofisialy omaly 08 Novambra 2021 ny herinandro maneran-tany natokana ho an'ny fandraharahana (GEW) izay natrehan'ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana (MICC)
La Réunion kely Mitaraina amin’ny hafanana sy ny fofona ny mponina
Tafiditra ao anatin’ny vanim-potoanan’ny hafanana tanteraka isika ankehitriny. Anisan’ny tena mitondra faisana ao anatin’izany ireo mipetraka amin’ny trano vy toy ny iainan’ireo mponina etsy La Réunion kely Ampefiloha.
Nidina an-dalambe ny Mpiasan’ny SECREN Netsehina ny miaramila, raikitra ny fisamborana…
Nidina andalambe nanamafy ny fitakiany ny mpiasan’ny SECREN (Société d’Etudes et de Construction et de Réparation Navales) any Antsiranana omaly maraina.
Antanety Arivonimamo Lanjaina amin’ny hazo ny mpiteraka sy marary
Mijaly ireo olona mpiteraka sy narary any amin’ny kaominina ambanivohitra Antanety, distrikan’Arivonimamo II. Lanjaina amin’ny hazo na irony antsoina hoe :